नजिक न्युज | कैलाली
गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै अत्तरियामा लोकराज पाण्डे (आगो) संयोजक रहेको संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। समितिले बिहिबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ। समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ।
विद्युतको तार सर्ट भएर आगो सल्केको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले दमकल, प्रहरी र स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्।
कैलालीमा निर्वाचित पालिका अध्यक्षको शपथ रोक्न आयोगको निर्देशन
यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट वडा नम्बर ३ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित नन्दराम गिरीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन भएकाहरु जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सपथ के गर्ने भन्ने अन्योल थियो।
धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि के हुँदैछ काम ?
धनगढीलाई मानसरोवरसम्म सडकमार्ग भएर जोड्न पहल भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसक लागि विश्व बैंकसँग ६५ अर्ब बजेट माग गरिएको मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दाबी गर्दै आएका छन्।
कैलालीमा लेखापालले विद्यालयमै छात्रालाई यौन प्रस्ताव राखेपछि...
पिडीत छात्राका अनुसार आफु परीक्षा फाराम भर्न विद्यालयको लेखा शाखामा गएको बेला केही रकम अभाव परेको र त्यसको बदलामा सहलेखापाल चौधरीले यस्तो दुर्व्यवहार गरेको बताएकी छन्। पिडीतको जाहेरी नपरेकाले अहिले छलफल मात्रै भैरहेको र जाहेरी आए कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
धनगढीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन
तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नारावाजी गरेका थिए।
कैलालीको एक होटेलमा पुरुष मृत भेटिए
२०७८ माघ १६ गते आइतबार नजिक न्युज संवाददाता
शनिबार उनी ओछ्यानमै घोप्टिएको अवस्थामा मृत भेटिएका प्रवक्ता जोशीले बताए। मृत्युको कारण भने खुल्न नसकेको र आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
अत्तरियामा खाजा पसल देखाएर यौनधन्दा, ग्राहकलाई तानीतानी लग्छन् सञ्चालक
कैलालीको अत्तरियामा दुईवटा यस्ता गल्ली छन्, जहाँ खाजा पसल देखाएर यौन व्यवसाय हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्नसक्छ। तर, यस्तो काम ३ वर्षदेखि चलिरहेको छ। पहाड रोडस्थित बसपार्क नजिकै पश्चिमतिर २ वटा गल्लीभित्र खाजा पसल देखाएर खुल्लम खुल्ला यौन व्यवसाय चलिरहेको छ।
धर्मकर्ममा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री !
केही महिनायता मुख्यमन्त्री भट्ट गृहजिल्ला केन्द्रित भएका छन्। उनी डोटीमा विभिन्न राजनीतिक तथा धार्मिक कार्यक्रममा सक्रिय रहेका छन्।
‘प्रहरीबाटै मोबाइल चोरिएको घटना अपत्यारिलो छ’
चोरीमा संलग्न भएका हवल्दार हेमबहादुर माल र प्रहरी जवान भरत बुडाल निलम्बनमा परिसकेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टाइगर टोलीमा कार्यरत उनीहरुविरुद्ध चोरीमा मुद्धा दर्ता भएर म्याद थप भइसकेको छ।
धनगढीको मोबाइल ग्यालरीमा चोरी गर्ने दुई प्रहरी निलम्बित
धनगढीमा घरबेटीलाई लड्डु खुवाएर भाडामा बस्नेले गरे लुटपाट
२०७८ पुष १९ गते सोमबार नजिक न्युज संवाददाता
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनाबारे जानकारी आएपछि अनुसन्धान थालेको बताएको छ। घरबहालवालाले भाडामा बस्दै आएकाहरुबारे विस्तृत जानकारी दिन नसकेको कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले बताए।
कैलालीको कर्णाली नदीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननले जोखिम, ठेक्का बन्द
उनले नदीको बहावलाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएको भनिए पनि तटबन्धको कारण सुरक्षित भइन्छ भन्नु गलत सावित भइसकेको बताए। उता जानकी गाउँपालिकाले भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का दिएको छ।
कैलालीमा खाद्यले धान खरिद नगर्दा किसान चिन्तित
२०७८ पुष ०८ गते बिहिबार नजिक न्युज संवाददाता
खेतको धान हेरेर आफै मख्ख पर्थे। उनको त्यो खुसी धेरै समय रहेन। धान काटेर खेतभरी बनाइएको धान बाढीले बगायो। बाँकी रहेको धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न पाएपछि लगानीसम्म आउला भन्ने आशा विक्रमको मरेको थिएन।
कैलालीमा श्रीमानको कुटाइबाट श्रीमती गम्भीर घाइते
भरतले घरायसी झगडा हुँदा दाउराले कीमसराको टाउकोमा हिर्काएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते भएकी उनलाई बर्दगोरिया अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि कोहलपुर रिफर गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले बताए। उनका श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए।
कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा अब कानुनको पढाइ पनि हुने
विद्यार्थीले कानुनको अध्यन गर्न पाउने क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले बताए। कानुन संकायतर्फ क्याम्पसले ४८ जनाका लागि भर्ना आवेदन आव्हान गरिसकेको छ। क्याम्पसमा यसअघि व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र कृषि संकायको पठनपाठन हुँदै आएको थियो।
टीकापुरबाट भजनी आउँदै गर्दा टीकापुर नगरपालिका-७ बैदीस्थित हुलाकी सडकखण्डमा रहेको कल्भर्टबाट खसेर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीका अनुसार साइकलमा सवार उनले मापसे गरेका थिए भने उनी साइकलसहित कल्भर्टबाट तल खसेका थिए।
कैलालीको एक क्याम्पसमा टिकटक बनाउन रोक, कारबाही गरिने
आइतबार एक सूचना नै जारी गरेर क्याम्पसले अब उपरान्त क्याम्पसको संरचना आउने तथा पोशाकमा टिकटक बनाइएको पाइएमा मोबाइल नियन्त्रणमा लिइ आचारसंहिता अनुसार कारबाही गरिने बताएको छ।
कैलालीमा ट्र्याक्टरबाट खसेर एक जनाको मृत्यु
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार टीकापुर -२ कै २४ वर्षीय दिनेश चौधरीले चलाएको सो ट्र्याक्टरबाट खसेका उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। चालक ट्र्याक्टरसहित इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ।
सरकारले वैकल्पिक विधिबाटै भएपनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्ने
विभागका अनुसार उक्त क्षेत्रको कुटी, नाभी र गुञ्जी क्षेत्रमा मात्रै मानिसको बसोवास रहेको छ भने करिब तीन सय घरधुरी रहेको उक्त क्षेत्रमा ७/८ सय जनसङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालमा पनि जनगणना गरिएको थियो।
आइतबार राति विजुलीको तार सर्ट हुँदा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले बताए।